I-Formestane ebomvu (566-48-3) HPLC≥98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / Ifomestane (566-48-3)
Akukho kalo SKU: 566-48-3. Udidi: abanye
Formestane oiwder yayilolokuqala ukukhetha, uhlobo I, i-steroidal aromatase inhibitor esetyenziselwa unyango lwe-estrogen-receptor inomdlavuza webele kwi-post-menopausal women. IFomestane icinezela ukuveliswa kwe-estrogen kwii-anabolic steroids okanye iprohormones. Ikwasebenza njengeprohormone kwi-4-hydroxytestosterone,…
Ifomula yeMolekyuli: C21H30O3
Ubunzima Ezinto: 302.41
Ukusetyenziswa kweFomestane (566-48-3) kumjikelezo we-steroids
I-Formestane (566-48-3), ebizwa nangokuthi lentaron, igama lekhemikhali: 4-hydroxyandrostenedione.
Ifomestane (566-48-3) Ukusetyenziswa
Ingqungquthela eqhelekileyo yefomane esithengisiwe yayifom yefom ye-gel kwaye yahlulwa kwi-100-200mgs ngesicelo. Abasebenzisi bayayifaka kwiziko elicocekileyo, elomileyo kwaye bahlambe ngokucokisekileyo; ngokuqhelekileyo emathangeni okanye kwizandla ezingaphezulu. Kwathatha i-1 kwiminithi ye-5 ukuba yome. Inguqu yejoyi yeenjongo zomhlaza wesibeleko kunye nabasebenzi be-bodybuilders yi-125mgs kabini ngeveki okanye i-250mgs kanye ngeveki.
IFormestane (i-CAS 566-48-3) ayibangeli ziphumo zimbi zininzi ngaphandle kokuba uxhatshazwa. Ngamanye amaxesha abakhi bomzimba baya kukhalaza ngamalungu omileyo, ukuguquka kwemizwelo, ukutshintsha kwe-libido, okanye ukugqithisa, okuqhelekileyo kuzo zonke ii-AI. Esinye isiphumo esezantsi yi-HDL (elungileyo) ye-cholesterol, ke kuya kufuneka ubukele indlela otya ngayo.
I-Formestane isizukulwana sesibini, esingenakuthenjwa, steroidal aromatase inhibitor. Inqanda i-enzyme ye-aromatase ejongene nokuguqula i-estrogens, oko kukuthintela ukuveliswa kwe-estrogen.
Umhlaza wesibeletho unokuba yi-estrogen evelele okanye ayikhathazeki. Uninzi lweengxube zebele zombele ziyi-estrogen. I-esrogen yesifo somhlaza wesisu ixhomekeke kwi-estrogen yokusebenza. Ngako oko ukususwa kwe-estrogen emzimbeni kunokuba yonyango olusebenzayo lwe-hormone ye-breast cancer.
I-Formestane ijoliswe ngokukodwa kwonyango lwabasetyhini be-postmenopausal. Ngokungafaniyo abafazi premenopausal abavelisa kakhulu estrogen zamaqanda, abafazi postmenopausal kuvelisa estrogen ezininzi kwizihlunu peripheral kunye ngoncedo enzyme aromatase. Formestane (566-48-3), i aromatase inhibitor, Ngoko ke ukunceda ukunciphisa imveliso yasekuhlaleni estrogen ngokubhloka i-enzayim aromatase zomzimba yoluvo (okt. Izihlunu adispose zamabele) ukunyanga hormone ezibuthathaka umhlaza webele.
Indlela yokuthenga iFomestane evela ku-AASraw